Azonao atao ve ny manampy ahy handresy ny fikarohana amazonaly amin'ny fahitan'ny mpanjifanao ambony sy ny teny fanalahidy?
Mampalahelo fa tsy misy toro-làlana handresy, na ny drafitra farany amin'ny hetsika hahazoana fahombiazana maharitra miaraka amin'ny lisitry ny vokatra hita ao amin'ny Amazon search ho tolotra mivarotra ambony. Ny zava-misy dia hoe maro ireo singa samihafa amin'ny fahombiazan'ny ecommerce eo, ohatra, toy ny lisitra sy ny vidin'ny fanavaozana, ny fandefasana sy ny fitantanana feedback. Tsy lazaina intsony ny fividianana, ny dokam-barotra, ny haba, ary koa ny ambiny hafa mahazatra loatra loatra na mety ho fotoana tena mandany fotoana.
Aiza no ahitana ny tena ifantohana?
Noho izany, andao hiatrika izany - tsy afaka ny hitantana azy irery ianareo. Raha ny tena izy, dia ny momba ny vokatra mahatratra ny toerana ambony ao Amazon dia mitady ny mpivarotra rehetra ho an'ny tanjona fototra any. Saingy ahoana no ahazoana tombontsoa amin'ny fifaninanana ary mitondra ny loham-pivarotana eo amin'ny tsena an-tserasera? Soa ihany, misy fitaovana mahasoa maro sy tranonkala an-tserasera azo alaina amin'ny fidirana malalaka, na amin'ny alalan'ny famandrihana avy hatrany sy ny famandrihana maharitra. Na izany aza, dia misy karazana safidy maro mifandraika amin'ny raharaha. Ary izany no mahatonga ny asa hisafidianana ny vahaolana tsara indrindra ho iray tena sarotra. Ary indreto rehefa maneho anao aho ny sasany amin'ireo ambony indrindra nasehoko sy ireo mpampiasa azo itokisana izay nampiasako ho an'ny tantaram-pahombiazako manokana ao amin'ny Amazon search satria ny mpivarotra an-dalamby dia manao dingana iray alohan'ny mpifaninana akaiky indrindra amin'ny niche. Noho izany, etsy ambany dia hasehoko anao ny fitaovana tsara roa sy toro-hevitra mahasoa mba hanatsarana ny zava-misy, farafaharatsiny rehefa tonga amin'ny fivarotana amin'ny Amazon toy ny pro.
Ny tenimiafina dia afaka ny ho tombontsoam-pahefana matanjaka
Ny tetikasa isan-karazany amin'ny Amazon dia manomboka amin'ny lisitry ny vokatra tsara. Raha ny marina, izy io no zavatra voalohany sy mety indrindra tokony hatao raha te-hiakatra any ambony any am-pitadiavana Amazon ianao ho mpivarotra lehibe ao amin'ny orinasa na ny orinasa vokatrao. Ary ny lisitry ny fanatsarana rehetra (mitovy amin'ny concept of original SEO) dia manomboka amin'ny votoatin'ny kalitao sy ny fikarohana voalanjalanja ho an'ny fikarohana. Ny tsara indrindra dia tokony ho raisina an-tanana miaraka amin'ny fahaiza-misaina manan-danja amin'ny fifaninanana amin'ny fotoana iray ihany. Noho izany, alohan'ny zavatra hafa dia manoro hevitra aho amin'ny fanandramana ny Old Key Planner Tool Tool amin'ny Google. Ity fitaovana ity dia hanampy anao amin'ny fahatakarana malalaka ny dikan'ny teny sy ny fehezanteny mifandraika amin'ny rohy izay tokony ho raisinao ho an'ny lohateninao sy ny famaritana ny vokatrao.
Mankanesa any Amazonia mba ho lasa mpividy ambony
Ary eto isika izao dia tonga any amin'ny teboka farany. Midika izany raha vao mahita sarim-panazongozonan'ny teny fototra misy anao ianao miaraka amin'ny fahaizana mandresy ara-drariny, fotoana izao hijerena ireo fikarohana lalindalina indrindra amin'ny mpanohitra mahomby anao - ary ampiasao ity fomba fijery mifanentana amin'ny tombony ho an'ny tombontsoanao manokana ity. Mba hampahafantarana ny fahafahana manandrana ny teny fanalahidy lehibe, manoro hevitra ny fisafidianana iray amin'ireo fitaovana tena nahafaty tena roa aho - raha te-hiditra amin'ny MerchantKeywords, na KeywordInspector - dia hitako fa tena manampy tokoa ny lisitra fanatsarana izay mamokatra mivantana. Ary avelao aho hiteny indray mandeha indray - fa resaka iray amin'ny safidinao. Amin'ny ankapobeny, noho ireo tahiry iraisampirenena goavambe ireo dia afaka manolotra anao haingana ireo teny fototra sy teny fikarohana voalazan'ireo mpivarotra velona mividy ny vokatra any Amazon. Mandritra izany fotoana izany, ny MerchantKeywords sy KeywordInspector dia afaka manome hery anao amin'ny fomba fitenenana manan-danja sy ny soso-kevitra azo tsapain-tanana - nahasambotra ary nisintona mivantana avy amin'ny mpanohitra akaiky anao. Dia izay! Ataovy izay hahazoana fanazavana amin'ny artifisialy manao izany rehetra izany - ary vita ianao Source .